8 Yakanakisa Kuburitsa Kuburitswa kwe 2020 | Linux Vakapindwa muropa
8 Yakanakisa Kuburitsa Kuburitswa kwe2020
Kune akawanda GNU / Linux distros kana kugovera zvakasiyana, zvese munzvimbo yedesktop yavanoshandisa, nemhando yemapakeji avakatarirwa, zvinoenderana naamai distro kwavanobva, nezvimwe. Ivo vanogona zvakare kusiyaniswa zvinoenderana nerudzi rwekuvandudza kwavanako uye zvavanoburitsa, ndosaka ndaida kuisa pano gumi akanakisa kuburitsa kuburitswa kwaunogona kuwana.
Pano ini ndicharatidza mamwe akatanhamara vanoshandisa iyi mhando yekuenderera kusunungurwa, kana iwe waitsvaga imwe yacho uye usina kusarudza kuti ndeipi yekushandisa ...
1 Rudzi rwekuvandudza
2 8 yakanakisa rolling kuburitsa distros
2.1 8th KuberekwazveOS
2.2 7th Endevor OS
2.3 6th Sabayon OS
2.4 5th Gentoo
2.5 4th Manjaro
2.6 Yechitatu Solus OS
2.7 2nd KuvhuraSUSE Tumbleweed
2.8 Yekutanga Arch Linux
Muzhinji, inogara ichitsvakwa kuve neese software uye masisitimu muiyo yazvino vhezheni inowanikwa. Izvi ndizvo zvinoshandiswa nevashandisi mushure memapurojekiti uye ndizvo zviri kugadziridzwa. Nezve izvi, iwe unogona kudzivirira mamwe mabugs uye kushomeka, pamwe nekuve kumusoro-kune-zuva maererano nemabasa uye rutsigiro rwehardware.
Zvisinei, pane zvimwe zvinopesana nekugara uine yazvino vhezheni, senge kugadzikana, kuenderana, nezvimwe. Panyaya yekugadzikana, izvi zvinogona kunge zvichideredzwa ne mhando dzakasiyana dzekukanda. Semuenzaniso:
Kugara uchisunungurwa: idzo distros dzinoburitsa vhezheni kazhinji kazhinji, segore rega, yega mwedzi mitanhatu, nezvimwe. Mukati meizvi panogona kuvewo nezvimwe zvine rutsigiro rwemukati kana nerutsigiro rwakawedzerwa (iyo inonzi LTS kana Rutsigiro Rurefu). Izvo zvirimo zvichave neepfupi-kwenguva mushambadzi rutsigiro, nepo iyo LTS ichawedzerwa kwemakore mashoma, kunyangwe kana nyowani vhezheni yedistro yatovepo. Mienzaniso yerudzi urwu rwekusunungurwa iri muDebian, Ubuntu, yakavhurikaSUSE Leap, nezvimwe. Mune zviitiko izvi, iyo yakazara distro inofanirwa kuvandudzwa nguva nenguva. Semuenzaniso, kana uine Ubuntu 6 chinja kuUbuntu 19.10 painowanikwa ...
Kutenderera Kuburitswa: iyo inoenderera ichigadziriswa, panzvimbo pekuita makuru kusvetuka nguva zhinji zvainoita ndeyekuti inowedzerwazve. Mienzaniso iri muKali Linux, yakavhurikaSUSE Tumbleweed, nezvimwe. Ndokunge, iwe unoisa kamwe uye mapakeji anovandudzwa zvishoma nezvishoma kune yavo yazvino vhezheni vhezheni.
Hafu Kutenderera Kuburitswa: iko kuenderera kwekuvandudza asi kuchengetedza kumwe kugadzikana mune base software. Ndokunge, mapakeji mazhinji anovandudzwa nguva nenguva, asi hwaro hweiyo distro hunogara hwakasimba kwechinguvana. Musanganiswa pakati pezviviri zvakapfuura uye izvo zvaunogona kuona mune distros seManjaro, Arch Linux, nezvimwe.
8 yakanakisa rolling kuburitsa distros
Zvino kana iwe uchida nzira yacho Rolling Kuburitswa, kana Hafu RR, ipapo ini ndinogona kukurudzira kuti utarise pane urwu runyorwa ne gumi anonyanya kufarirwa uye akakurudzirwa aripo:
Kuberekwazve OS ndeimwe Arch Linux-based distro, nechinangwa chekuita kwakanyanya kuita uye hukuru hwekugadzirisa kugona. Iine mukana wekusarudza pakati peanopfuura gumi nemashanu akasiyana desktop desktop kuti uise. Uye zvakare, inoratidzira nzira dziri nyore dzekumisikidza uye tsigiro yemapaketi epaketi. Iyo inotopa sarudzo yekumisikidza Anbox kumhanyisa yemuno Android maapp ...
7th Endevor OS
Endevor OS Iyo inotenderera kuburitsa distro zvakare yakavakirwa paArch Linux, iine mamwe maapplication ane GUI asi zvakanyanya akatarisana nekushandiswa kweiyo terminal. Uye zvakare, kune 8 desktop desktop inowanikwa, seGNOME, XFCE, Deepng, KDE Plasma, uye Cinnamon. Sekushomeka, ine maneja wayo wepakeji, iyo yekumisikidza, kugadzirisa, kusunungura uye kugadzirisa mapakeji neimwe nzira ...
Dhawunirodha Endevor OS
6th Sabayon OS
Sabayon OS iri Gentoo-based distro, inoitirwa kuve wekutanga-ane hushamwari, akatsiga, uye aine akasiyana siyana epamberi-akaisirwa mafomu. Zvese zvinhu zvinowanika muGentoo zvinosanganisira zvishandiso zvekugadzirisa kuti zvive nyore kwauri. Izvo zvakare zvakanaka pakuonekwa kwehardware, nesarudzo pakati peMATE, KDE Pasma, XFCE, GNOME, uye LXDE. Uye zvakare, inowanikwa semufananidzo weDocker, desktop vhezheni, server (shoma), uye Raspberry Pi ...
Dhawunirodha Sabayon OS
Gentoo Haisi yekutanga kwazvo hushamwari distro, yakaoma mune zvakawanda zvinhu, pamwe nekuve akasiyana zvakanyanya kubva kune vamwe mune dzimwe nguva. Asi izvi hazvireve kuti hazvina kunaka, zvakapesana. Kuburitswa uku kwakanyanya kuchinja, uye kunoshandisa portage semaneja wepakeji, sisitimu yakafanana nezviteshi zvinoshandiswa pazvirongwa zveBSD.
Manjaro ndeimwe yakakurumbira Arch Linux-based distro, uye nepo ichigovana yakawanda yayo maficha, yakagadzirirwa kuti ive yakanyanya mushandisi-inoshamwaridzika uye nyore kunyangwe kune vanotanga. Inowanikwa pamwe neKDE Plasma, GNOME uye XFCE nharaunda, iine KDE ichisarudzwa nekuda kwekuita kwayo kwakawanda uye runako. Nekudaro, iwe wakasununguka kushandisa dzimwe nharaunda kana iwe uchida ...
Yechitatu Solus OS
Solus OS kana shanduka OS chakasununguka chega chinotenderera chakaburitswa chakagadzirirwa imba nehofisi. Iyo haina kubva kune chero imwe, mukuwedzera, iri nyore uye inosanganisira kuwanda kwekushandisa kwekushandisa kwezuva nezuva uye zvimwe zvakawanda zvaunogona kushandisa kuburikidza neSoftware Center. Shandisa iyo Budgie graphical nharaunda, kunyangwe iwe uchigonawo kusarudza MATE, KDE Plasma, uye GNOME. Kana iri yako package package, shandisa eopkg ...
2nd KuvhuraSUSE Tumbleweed
vhura Iine ma distros maviri: Leap uye Tumbleweed. Muchiitiko cheTumbleweed, iko kutenderera kunodzokedzana kwaungade zvakanyanya. Inofananidzwa neLeap, haina kugadzikana, saka haizove yakakodzera kune nharaunda dzekugadzira, asi iwe unogona kuve nezvazvino mumapakeji. Iyo yakavakirwa paRPM kurongedza uchishandisa rpm uye zypper, kana iyo YaST2 graphical chishandiso. Ehezve, inowanikwa nenzvimbo dzinoverengeka kusarudza kubva ...
Yekutanga Arch Linux
Chekupedzisira, iyo inotenderera kuburitsa distro iyo inovhara iyi runyorwa iri Arch Linux. Iyo yakavakirwa pane pacman package maneja uye ine zvakapfuma zvinyorwa zvinonzi AUR (Arch User Repository) ine nharaunda inoshanda. Kunyangwe iri yakaoma kushandisa, zviri nyore kwazvo mukugadzirwa. Uye zvakare, yakagadzikana, yakasimba uye yakachengeteka, iine hukuru hwekuita uye yakakura hunyanzvi hwekuigadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » 8 Yakanakisa Kuburitsa Kuburitswa kwe2020
Vanosiya kupi Calculate Linux? Ari kuita basa rakakura kana zvasvika pakuburitswa uye hazvizivikanwe: c
Void linux ingadai isipo
Nezve Arch Linux, kuoma kwayo, kupfuura mukushandisa ndinoiona mukuisirwa kwayo. Ichokwadi kuti mune chero gadziriso unofanirwa kuita nemaoko, zvakapusa kana ukabvunza "Arch Linux Nhau", vanokupa zvese zvakaitwa.
Nekuremekedza kwese kwakakodzera, ini ndaizowedzera mamwe mashoma anouya mundangariro izvozvi, KaOs, Chakra, uye PCLinux. Chokwadi pane zvakawanda. Kwaziso.
Edgar bastidas akadaro
Ivo vanoshaya chakanyanya kukosha maererano nezvangu maitiro, Deepin 20
Pindura Edgar Bastidas
Linux 5.10: Inoratidzira Huru Nhanho Mberi kune RISC-V